AOL Whitelist - Sida loo helo Whitelisted oo leh AOL
Talaado, September 11, 2007 Talaado, July 15, 2014 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa sababta oo ah weli waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ISP iyo inta ugu xun ee ku saabsan emaylka, AOL runti waxay leedahay adeeg boosteejo ah oo khadka tooska ah khadka tooska ah. Waxay ahayd inaan la xiriiro iyaga markii macmiilku soo wariyay inay dhibaato ka qabaan emaylka loo maro cinwaanada emaylka ee AOL. Sida xaqiiqda ah, waxaan ogaanay in cinwaanada IP ee codsigeena la xanibay.
Taasi waxay u egtahay xoogaa cabsi, sidii inaan nahay spammer ama wax… laakiin ma nihin. Dhammaan emaylladayada ayaa ah kuwo macaamil ganacsi ama casuumaad dabiici ah. Xaqiiqdii, ma jiro emayl suuq-geyn ah oo ka soo baxa cinwaanadan. Waxaan wacay saaxiib wanaagsan iyo samatabbixiyaha guru, Greg Kraios, isaguna wuxuu si toos ah iigu toosiyay macluumaadka xiriirka ee postmasters-ka AOL iyo sidoo kale Websaydhka AOL. Waan wacay oo way ii sheegeen waxayna ogaadeen talaabooyinka aan qaadi karo si aan u xanibo oo aan ugu daro liiska shaqalaha caddaanka.
Waxaan ogaaday dhibaatada noogu wayni inay ahayd in nidaamkeenu u dirayo xisaabaadka emailka AOL ee khaldan ee leh naafanimadayada raadinta DNS. Dib u celinta DNS ayaa macnaheedu yahay ISP si ay u eegaan cinwaankaaga iyo macluumaadka shirkadda cinwaanka IP ee ay ka imanayaan. Markii aan daminay, waxaan u ekaanay spammer. Cinwaanno xun oo kugu filan - AOL wuxuu go'aansaday inuu fiiriyo cidda aan nahay. Markii ay ogaan kari waayeen cidda aan nahay, ayay na xireen. Macno ayuu sameynayaa! Ma dhihi karo waan eedeynayaa.
Ka dib markii aan helnay Dib-u-hagaajinta DNS, AOL ayaa tuuray baloogga. Waxaan sidoo kale la hadlay kooxdayada iibinta waxaanan u sheegay inay joojiyaan dembiyada ay la galaan cinwaanada emaylka AOL (iyagu waa kuwa ugu fudud ee la qoro, maahan?). Ka dib markii xannibista la tuuro, waxaa laguu oggol yahay inaad ka codsatid caddeynta liiska bogga Boostada. Waxaan dalbaday ugu yaraan darsin jeer - laakiin si dhakhso leh ayaan ku ogaaday in shinbirahaagu ay ahaadaan kuwo saf ah kahor intaadan samayn:
Waxaan awood u siinay Dib-u-Celinta Dib-u-celinta DNS ee mid kasta oo ka mid ah Cinwaanada IP ee aan u dirno emayl dibedda.
Waxay ahayd inaan u sameyno cinwaan emayl jawaab celin ah AOL si uu noo qoro marka ay jiraan arrimo emayl. Waxaan abaabulnay xadgudub @. Waxaan wali ka shaqeyneynaa sameynta cinwaanka cinwaanka e-maylka ee "Khaladaadka - Laakiin" tani waa bilow weyn.
Waxay ahayd inaan sugno dhowr maalmood kadib markii aan xannibnay.
Cinwaankaagu waa inuu u dhigmaa cinwaanka xiriirka iyo cinwaanada emaylka ee ku soo noqnoqda. Waad awoodaa iska diiwaangeli cinwaanka emaylkaaga FBL AOL.
Haddii aad leedahay xayndaabyo kala duwan, waa inaad mid walba dalbataa.
Hubso inaad kormeerto cinwaanada emayl ee aad ku soo gudbisay. Waxaad u baahan doontaa inaad gujiso xiriirinta xaqiijinta ka hor intaanay ku shaqeyn doonin codsigaaga liiskaaga.
Talaabada ugu dambeysa waa inaad sugto jawaab. Haddii laguu diido, waxaad wici kartaa Boostada oo aad siin kartaa id tixraaca. Tani waxay u oggolaan doontaa iyaga inay si dhakhso leh u eegaan oo ay u arkaan waxa qaldan. U istaag inaad tan sameyso wax yar!
Waxaan rajeynayaa maalinta aan riixi karno emaylladan midkeenna adeeg bixiyaha emaylka nidaamka sidaa darteed maahan inaan ka walwalsho arrintaas! Waxaan sugayaa sii-deynta rasmiga ah ee nidaamka emaylkooda macaamil ganacsi (oo aan ka caawiyey qeexitaankooda!) Iyo sidoo kale xoogaa kobaca shirkadeena. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u adeegsan karno adeegyadooda soo-dejinta, ayaa ka sii fiican!
AOL waxay leedahay adeegyo fiican oo Boostada ah, laakiin waxaan doorbidayaa inaanan u dulqaadan madax xanuunka gabi ahaanba. Hal qoraal, haddii aad isweydiineyso haddii aan ka walwal qabo inay naga xayiraan ama dhibaatada ay u qaadaneyso inay naga caddeyso… haba yaraatee. Waxaan jeclahay inaan arko shirkad ka feejigan SPAM oo aan daryeelo macaamiishooda.
Waxay qaadatay dhowr isku day ka hor intaanan ku filneyn taariikhda dirista ee AOL si loo caddeeyo, laakiin waxay sameeyeen dhowr isku day ka dib:
Codsigaaga Whitelist, oo leh lambarka xaqiijinta xxxxxxxx-xxxxxx, waa la oggolaaday.
Ma hubo in emaylladaadu xanniban yihiin iyo in kale? Hubso inaad isticmaasho an Qalabka kormeerka meelaynta sanduuqa si loo helo loona xaliyo arrimaha u gaarka ah ISP.
Tags: 250okAOLliiska madowaol postmasteraol caddeeyeemail xannibmayfblFaallooyinka ra'yigameelaynta sanduuqabixiyaha adeegga internetkaispfilter qashinkaspamcabashooyinka spamfilter spam